Alahady 09 Febroary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 09 FEBROARY 2020- ALAHADIN'NY BAIBOLY
« Koa amin'izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. » (Matio 7:24)
Alahady faharoa niandraiketanan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy androany sy alahadin’ ny Baiboly mbola nibanjinana ny lohahevitra hoe « Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo ». RAZANAPARANY Beby, Diakona sy mpikambana ao amin’ny FMKS, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. RATOBISON RATOVOHERY Lantosoa no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary ZANAHARITSIMBA Rova no namaky ny tenin’ny Soratra Masina, samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana. Ny Mpitandrina ROGER Auguste, Evangelisitra ao amin’ny Fitandremana Edena Vaovao Katsepy, Synodam-paritany Boina vaovao no nitory ny tenin’Andriamanitra. Nisy ny rakitra am-baravarana fanohanana izany mpanompon’Andriamanitra izany .
Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia ny teny ao Salamo 119 -137-142; 144 no nentin’ny mpitarika ary niarahana namaky ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra: « Marina Hianao, Jehovah ô, Ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin’ny fahamarinana Sy ny fahatokiana indrindra ny teni-vavolombelonao. Efa maharitra aina ahy ny fahasaro-piaroko, Satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy. Voazaha tœtra tamin’ny memy ny teninao, Ka dia tian’ny mpanomponao. Kely aho ka natao ho tsinontsinona; Nefa tsy hadinoiko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, Ary marina ny lalànao. Ny fahamarinan’ny teni-vavolombelonao dia mandrakizay; Ampianaro aho, mba ho velona. » Taorian’ny teny Soratra Masina novakiana dia natao ny Hira FFPM 823, 1-3-4. Nisy ny vavaka fiderana sy fisaorana avy eo
Ny sitrapon’Andriamanitra natolotra ny mpiara-mivavaka dia noraisina tao amin’ny I Jaona 2 : 3-5,17 « Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala Azy isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hœ: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an’Andriamanitra izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay. » Hira FFPM 242, 1-2-4
Tao amin’izany vavaka izany no nanambaran’ny mpitarika fa Tompon’ny hery rehetra Andriamanitra ary tsy mivadika amin’ny fanekena nataony. Be famindram-po Izy nefa isika dia olombelona ihany, tsy mihaino ny sitrapony. Koa mangataka ny famindram-po sy mifona. Mino izahay, hoy ny mpitarika, fa Andriamanitra mahatoky sy mpamindra fo Ianao. Ny hira FFPM 449, 4 no natao taorian’izay
Ny teny famelan-keloka notononina dia nalaina tao amin’ny Isaia 44:22 « Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho. » sy Lioka 19:10 « Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very. »
Ny fanekempinoana laharana faharoa no niaraha-nanonona avy eo taorian’ny hira FFPM 409, 1-2
Zoky ANDRIANIFAHANANA Hantarisoa, Mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 5 no nanatanteraka izany. Ny lohahevitra nohazavaina tamin’izany dia novakiana tao amin’ny Salamo 119, 11 “ Ato am- poko no iraketako ny teninao. Mba tsy hanotako aminao”.
Tantara mahakasika Ramatoa mpivarotra iray no nentiny Zoky ANDRIANIFAHANANA Hantarisoa tamin’ny fotoana natokana ho an’ny sekoly alahady. Rehefa tsy misy mpividy entana eo aminy dia mamaky Baiboly izy. Indray andro nisy mpividy nanontany azy hoe inona no mahavariana anao ao ? Dia namaly ramatoa mpivarotra hoe mamaky Baiboly aho satria ao no misy ny tenin’Andriamanitra. Iza no milaza aminao fa tenin’Andriamanitra no amin’ny Baiboly ao ! Dia gaga ramatoa fa misy olona tsy mahafantatra ny tenin’Andriamanitra. Amiko hoy ilay mpividy dia ny masoandro no manazava sy manafana ahy.
Dia hoy ramatoa, ny ahy kosa dia ny tenin’Andriamanitra no manazava sy manafana ny foko. Lesona tiana ho tsohahina dia hoe : iza amintsika no sahy hijoro vavolombelona fa ny tenin’Andriamanitra no iainantsika?.
Taorian’izay tantara sy lesona izay dia natao ny Hira : 823, 3 sy ny vavaka.
Ny mpitantsoratry ny Fiangonana RAZAFIMAHARO Mamy no namaky izany.
Kofehy volamena : fanokanana trano foibe FJKM any Mahajanga amin’ny volana aogositra. Ary mangataka ny fitondrana am-bavaka
Trano fiantohana Aroriaka : miantso ny mpanjifa handray anjara
Foibe FJKM : Miantso ny mpianakavy ny finoana hanao tolo-tanana noho ny voina niatra teto amin’ny firenena
Synodamparitany andrefana : mampanao fifaninana hira faneva ary ny lohahevitra amin’izany dia hita ao amin’ny I Petera 5. Misy andininy telo sy isan’andininy. Mampanao fifaninana logo ihany koa, atao amin’ny taratasy 21 x 29. Daty farany fandraisana anjara : 29 febroary 2020
Sampana Lehilahy Kristianina dia manasa ny mpivady , tanora miomana ny hivady ny asabotsy 15 febroary 2020 amin’ny 2ora sy sasany. Lohahevitra : Tokantrano sambatra
FJKM Miandrarivo – Alakamsiy 13 Febroary . Sampana Fifohazana
FFPM : fiofanana natokana ho an’ny zatovavy 17 ka hatramin’ny 30 taona. Manana ny marim-pahaizana BEPC. Daty farany fisoratana anarana : 25 febroary 2020
Andron’ny Mampiely Baiboly : FJKM Analakely – Alahady 09 febroary 2020 amin’ny 3 ora tolakandro.
Fivoriambe (AG) ny sampana Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena amin’ny alahady 16 febroary 2020. Koa miantso ny mpampianatra, ny kilasy 7 no miakatra, ny ray amandreny ary ny sakaizan’ny sekoly alahady
Mampanao fifaninana Logo ny sampana Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena. Farany fandraisana anjara : 01 martsa 2020.
Rantsana fanantenana : fifampiarahabana noho ny nahatrarana ny taona vaovao, ny asabotsy 23 febroary 2020
FMKS : fifampiarahaba noho ny nahatrarana ny taona vaovao, ny alahady 16 febroary 2020. Misoratra anarana izay handray anjara
Komity trano atsimo : mivory ny talata
Vaomiera ny Aim-panahy : mivory ny alarobia 12 febroary 2020 amin’ny 06 sy fahefany
Miantso ny mpandray fanasan’ny Tompo ho amin’ny fiofanana hiditra ao amin’ny SETELA
Fandalinana ny finoana sy fandalinana ny Filazantsaran’I Jaona ny zoma 21 febroary
Manentana ny mpivady, ny tokantrano kristiana handray anjara amin’ny andron’ny mpifankatia ny zoma 14 febroary 2020, izay hiarahana amin’ny AFF. Lohahevitra ho banjinina amin’izany dia ny hoe “Mpivady mahatoky”.
Ny mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana ANDRIAMASINORO Tantely no namaky ireo voady sy rajki-pisaorana. Ireo hira nangatahina tamin’izany dia ny hira 731, 1 – 488, 2 – 36, 3 – 171, 1 – 338, 1 – 428, 4. Nanolorana ny rakitra ny hira FFPM 437, 3
VAVAKA SY VAKI-TENY
Nohiraina ny hira FFPM 179, 1-4 mialoha ny vavaka sy vakiteny. Nitari-bavaka mialoha ny vakiteny RATOBISON RATOVOHERY Lantosoa. Ary namaky ny teny Soratra Masina tao amin’ny Perikopa : II Tantara 23, 1-11 – Matio 7, 24-29 – Asa 20, 32-35 – ZANAHARITSIMBA Rova. Nohiraina ny Hira FFPM : 354, 3
Nasongandin’ny Mpitandrina mialoha ny toriteny ny lohahevitry izay banjinin’ny FJKM mandritra ity volana febroary ity dia ny hoe “Mahatoky ny Teny Vavolombelon’ny Tompo », sy ny maha alahady ny Baiboly androany alahady 09 febroary.
Ny teny Soratra Masina nitondran’ny Mpitandrina hafatra sy ny fampianarana dia hita tao amin’ny Matio 7, 24-29. Toriteny nataon’i Jesosy Tompo teo an-tendrombohitra ary namaranany ny lahateniny ary nasehony tamin’izany ny maha zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra.
Lohahevitra roa no nasongandin’ny Mpitandrina ROGER Auguste :
Mampiorina tsara ny finoana ny tenin’Andriamanitra :
Fototra iorenan’ny finoana mihitsy (fondation) ny tenin’Andriamanitra ka tsy maintsy henoina sy ankatoavina raha te hirona amin’ny finoana ny mpanara-dia ny Tompo sy ny mpihaino azy. Isika mianatra ny Soratra Masina dia efa mihaino izany hoe mandre, mamaky ny Soratra Masina. Mankato izany hoe mampihatra ny teny nohenoina ary mampihatra eo amin’ny fiainana. Zava dehibe ny fampiharana ny tenin’Andriamanitra. Hamafisina izany ao amin’ny Jakoba 1, 22 : “Fa aoka ho mpakato ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo”. Ary mbola hamarininy Jeso izany ao amin’ny Lioka 11, 28 :” Mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina izany”.
Ohatra noraisina tamin’izany ihany koa ny fampianarana nataon’ny Ray aman-dreny Filohan’ny FJKM IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi fony izy mbola nitondra sy nitandrina tao amin’ny FJKM Androndra. Nampianatra tsianjery manao hoe ” ny tenin’Andriamanitra ianarana dia tsy mety mihintsy raha tsy asiana fampiharana”. Noho izany dia tena zava-dehibe ny fampiaharana ny tenin’Andriamanitra ary ny finoana dia avy amin’ny teniny Kristy. Romana : 10, 17 “Koa ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin’ny tenin’iKristy”
Zava-dehibe eo amin’ny fiainantsika ny Soratra Masina. Mampihorona ny finoantsika, ho tsara fototra, tsy aza hozongozonina. Misy amintsika mazoto mivavaka kanefa toa variana amin’ny zavatra any ivelany. Mila ampahatsiahivina isan’andro ny tenin’Andriamanitra. Ny fampiharana anefa tavela. Tokony hatao ny mamaky Baiboly isan’andro sy mianatra ny Soratra Masina any amin’ny sampana na conference, ….. Samy misaintsaina izany isika.
Mampandresy amin’ny ady sarotra ny tenin’Andriamanitra :
Asehon’I Jesoa amin’ny Soratra masina amin’ny alalan’ny fanoharana izay ataony toy ny ranon’orana, rivotra mifofofo ny olam-piainana mety hitranga amin’ny fiainan’ny mpanara-dia azy. Mety Hisedra ny sarotra, tahaka izany ny mpanaradia. Rehefa miorina tsara amin’ny fototra tsara ny finoana dia lasa mpandresy. Ny Matio 4 7: ao no nampiasan’I Jesoa ny Tenin’Andriamanitra ary nandreseny ny fakampanahy. Eo no nanararaotan’ny devoly nandavo izay tsy mitoetra tsara. .
Io Tenin’Andriamanitra io ihany no ampiasain’i Jesoa mba hamaliana ny olana rehetra, toy rivotra nifofofo, nitony koa ny rano, ny olana nosedraina teny amorondrano. Jeso nilaza fa Izay maharitra hatramin’ny farany no ho vonjena. Namafisina hatrany fa ny manana sy miorina ny tenin’Andriamanitra dia mpandresy ary haharitra hatrany farany isika. Mamaky ny Baiboly isan’andro, ary izay renao dia ampiharo amin’ny fiainana. Miasa mba hahafantsika miasa ho an’ ny hafa. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ataovy zava-dehibe ny tenin’Andriamanitra. Tiava ny namanao tahaka ny teninao. Ahoana ny fampiharantsika izany ?
Vita ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Taninketsa
Tao izany vavaka izany no nanaovan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina vavaka ho an’ny fiangonana sy ny mpitarika ny fiangonana, ny alahadin’ny Baiboly, ny fiomanana ny amin’ny Synoda lehibe amin’ny volana aogositra, ny andron’ny mpifankatia amin’ny zoma 14 febroary, ny kristiana eto amin’ny fitandremana, ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, ny fitoantoka volana febroary mba ho tanteraka sy tsy ho azon-tsampona. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Ny zaza natao Batisa androany dia ny zaza RALISON Ny Irina Kenny Harivony , teraka tamin’ny 01 Febroary 2017 zanak’I R/toa RALISON Ny Hasina. Ny mpiantoka ny zaza dia R/toa HARINOSY Lantoniaina Sylvia
Ny Hira FFPM 205: 1,2 no natao mialohan’ny namakiana ny tondrozotra sy nanolorana ny tsodrano ary ny Antema 5 no namaranana ny fotoana. Nisy taorian’ny fanompoam-pivavahana ny asa sy fampaherezana niandraiketan’ny Sampana Fifohazana.
Tompon’andraikitry ny fafana : RAJAOFETRA Voahangy
Tompon’andraikitry ny fanamafisam-peo : RAKOTOVOLOLONA Lova
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny vola – Vaomieran’ny aim-panahy – Vaomieran’ny fifandraisana